NAB Show ကိုသတင်းထုတ်လွှင့်ဘိ, NAB ပြရန်၏တရားဝင်ထုတ်လွှင့်ခြင်းဖြင့် - - NAB Show ကိုတိုက်ရိုက် SI ဗဟိုနဲ့အတူအမေရိကန်စျေးကွက်အောင်မြင်ပြီးနောက် RASCULAR'S ပဲ့ပွဲဦးထွက်တွင် AT NAB
Home » သတင်း » SI ဗဟိုနဲ့အတူအမေရိကန်စျေးကွက်အောင်မြင်ပြီးနောက် RASCULAR'S ပဲ့ပွဲဦးထွက်တွင် AT NAB
RascularPC-based Multi-device ကိုမာစတာထိန်းချုပ်မှု၏ဦးဆောင်ကုန်ပစ္စည်းပေးသွင်းဒီနေ့က၎င်း၏မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည်ကြောင်းကြေညာလိုက်ပါတယ် သံခမောက် NAB 2015 မှာကို manual ထိန်းချုပ်မှုဖြေရှင်းချက်။ Rascular ပြီးသားထိန်းချုပ်မှုမှနည်းပညာတစ်ခုတပ်ဆင်ပြီးစီးခဲ့ပါသည် သဟဇာတ'' s ကို SI နှင့်ပြန်လည်ရောင်းချသူများနှင့်အတူ routing Spectrum ChannelPort ™နှင့်မြက်ချိုင့် Encore ဗဟိုဗီဒီယိုစနစ်များ.
Rascular ရဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်ထုတ်ကုန်ပဲ့နေတဲ့မာစတာထိန်းချုပ်မှုပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပလေးအောက်စနစ်များကို PC-based ကို manual ထိန်းချုပ်မှုပေးပါသည်။ ဒါက touchscreen ကသို့မဟုတ် PC user interface ကိုအပေါ်ရိုးရှင်းသောခလုတ်သို့မျိုးစုံ, လူထုကို devices တွေကိုဖြတ်ပြီးရှုပ်ထွေးသောလုပ်ငန်းဆောင်တာတည်ဆောက်ခြင်းအားဖြင့်အောင်မြင်ခဲ့သည်။ အဆိုပါပဲ့ interface ကိုတစ်ဦးအော်ပရေတာလိုအပ်တယ်, on-ဝေဟင်ပလေးအောက်ကိုကွင်းဆက်၏လွယ်ကူသောထိန်းချုပ်မှုကိုထောက်ပံ့ပေးသကဲ့သို့ရိုးရှင်းတဲ့သို့မဟုတ်အဖြစ်ခေတ်မီစေနိုင်ပါတယ်။
Rascular နှင့်အတူ၎င်း၏မိတ်ဖက်မီးမောင်းထိုးပြပါလိမ့်မည် သဟဇာတယင်းကိုထိန်းချုပ်အတွက်ပဲ့၏အထူးသဖြင့်အသုံးပြုခြင်း သဟဇာတ spectrum ™မီဒီယာဆာဗာနှင့် spectrum ChannelPort ™ပေါင်းစည်းရုပ်သံလိုင်းပလေးအောက်စနစ်များကို။
သူ Mike Schmidt က, ဗဟိုနှင့်အတူအကြီးတန်းစနစ်များအင်ဂျင်နီယာချုပ်, ကျနော်တို့ခေါ်ဆိုခစာတစ်စောင်ဘူတာနှင့်အများပြည်သူထုတ်လွှင့်အပေါ်အာရုံစူးစိုက် "ဟုပြောသည်။ ကျနော်တို့နှင့်အတူပဲ့၏အောင်မြင်သောတပ်ဆင်ခပြီးသားပြီးစီးခဲ့ပါပြီ သဟဇာတ'' s ကိုလက်စွဲထိန်းချုပ်မှုများကိုပြုလုပ်သုံးပြီးထုတ်လွှင့်နှင့်အတူ Spectrum ChannelPort ။ ကျနော်တို့အမှန်ပင်ကျနော်တို့ကို manual ထိန်းချုပ်မှု tools များပိုမိုလျော့နည်းဘဲ, အရေးကြီးသောဖြစ်လာမယ့်ယုံကြည်, US မှာ Rascular ၏နည်းပညာအဘို့ကောင်းသောအခွင့်အလမ်းများကိုကြည့်ရှုပါ။ အလိုအလျောက်ပျက်ကွက်, သို့မဟုတ်သင်တိုက်ရိုက်ရှိုးလက်စွဲစာအုပ်ထိန်းချုပ်မှုလိုအပ်ပါတယ်, ဒါမှမဟုတ်ရိုးရိုးနေ့က-to-နေ့ကဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုများအတွက် အကယ်. Rascular လာရှိရာ, ထို့နောက်တစ်ဦးကို PC ပေါ်တွင်အသုံးပြုသူ-defined ပြားကနေတဆင့်ကို manual ဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုခွင့်ပါပဲ။ ဒါဟာအင်အားကြီးမားသည့်စနစ်ရဲ့ Rascular ထိန်းချုပ်မှု၏အရေးပါသောအဆင့်ကိုပေး။ ကျနော်တို့ကို manual ထိန်းချုပ်မှုကိုသာပိုမိုအရေးကြီးသောဖြစ်လာမယ့်, ဈေး၌ကျနော်တို့လည်ပတ်သည့်အတွက်ဟုယုံကြည်ကြသည်။ "
Roddy Pratt, Rascular နှင့်အတူနည်းပညာဆိုင်ရာဒါရိုက်တာ, ကျနော်တို့ US မှာပဲ့စတင်အကြောင်းကိုအလွန်စိတ်လှုပ်ရှားဖြစ်ကြပြီးကျွန်တော်အလွန်ဗဟို၏ကနဦးရဲ့အောင်မြင်မှုခြင်းဖြင့်အားပေးအားမြှောက်ကြသည် "ဟုပြောသည်။ သူတို့ကမလိုအပ်သည့်အခါကျွန်ုပ်တို့၏နည်းပညာ, သူတို့လိုအပ်တိကျစွာအဆိုပါလုပ်ဆောင်ချက်ကိုတစ်ခလုတ်ကိုများ၏ထိတွေ့မှုအနည်းဆုံးအော်ပရေတာကို manual access ကိုပေးသည်။ "
ယခင်: Codex Action Cam DP Phedon Papamichael ASC GSC သည်တစ်ဦးကဗြာထေူ
နောက်တစ်ခု: SGL ASPERA cloud အခြေခံသိုလှောင်မှုစနစ်နှင့်ကပ်ဘေးဒုက္ခ RECOVERY လုပ်ငန်းအသွားအလာပေးပူးပေါင်းခြင်းကိုကြေညာ